ကွန်ပြူတာကြောင့် မျက်စိ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Computers & Technology » ကွန်ပြူတာကြောင့် မျက်စိ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
ကွန်ပြူတာကြောင့် မျက်စိ ထိခိုက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်
Posted by Zaw Wonna on Jul 13, 2010 in Computers & Technology, Know-How, DIY |7comments
ယနေ့ကမ္ဘာတွင် ကွန်ပြူတာသည် လူသုံးများသော ပစ္စည်းတစ်ခု ဖြစ်လာသကဲ့သို့ ကွန်ပြူတာကြောင့် မျက်စိထိခိုက်မှု များကိုလည်း သုံးစွဲသူများ ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ကွန်ပြူတာအသုံးများခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ရောဂါလက္ခဏာများသည် တစ်နေ့လျှင် အနည်းဆုံး ၆ နာရီနှင့်အထက် ကွန်ပြူတာသုံးစွဲသောသူများတွင် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
၂။ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ကို အာရုံစိုက်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃။ မျက်စိ ခြောက်သွေ့ခြင်း
၅။ ကွန်ပြူတာ ဖန်သားပြင်မှ အနီးအနားရှိ အခြားနေရာများသို့ အမြင်ပြောင်းရွှေ့ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း
၆။ အမြင်အာရုံ ပျောက်ဆုံးခြင်း
ရ။ အလင်းရောင်ကို အထိမခံနိုင်ခြင်း
၄င်းရောဂါလက္ခဏာများမှာ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင်ကို ကြည့်ရာ၌ မျက်စိအား အနားမပေးပဲ အချိန်ကြာမြင့်စွာ ကြည့်ရှုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် မျက်စိသည် တစ်မိနစ်လျှင် ၁၅ ကြိမ်မှ အကြိမ် ၂၀ အထိ မျက်တောင်ခတ်လေ့ရှိသော်လည်း ကွန်ပြူတာသုံးစွဲနေစဉ်တွင် ၆ ကြိမ်မှ ၈ ကြိမ်အထိသာ မျက်တောင်ခတ်လေ့ရှိကြသည်။ ထို့ကြောင့် မျက်စိအောင့်ခြင်းနှင့်တကွ အထက်ပါရောဂါလက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။
ထို့ကြောင့် ကွန်ပြူတာသုံးစွဲနေစဉ်တွင် အောက်ပါ အချက်များကို ပြုလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
၁။ မကြာခဏ မျက်တောင်ခတ်ခြင်း ပြုလုပ်ပါ။
၂။ ကွန်ပြူတာ အသုံးပြု၍ ၁၀ မိနစ်ကြာတိုင်း မိမိနှင့် ၁၀ မီတာအကွာအဝေးမှ အရာဝတ္ထုများကို ၁၀ စက္ကန့်ခန့် စိုက်ကြည့်ပေးပါ။
၃။ အခန်းတွင်း၌ သင့်တော်သော အလင်းရောင်ကို ထားရှိပါ။
၄။ အလင်းပြန်နှုန်း မြင့်မားသော CRT မော်နီတာများအစား LCD မော်နီတာများကို သုံးစွဲပါ။
၅။ ကွန်ပြူတာသုံး မျက်မှန်ကို သုံးစွဲပါ။ မျက်လုံးအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ ကြွက်သားများအား ပုံမှန် နှိပ်နယ်ခြင်းပြုလုပ်ပါ။
၆။ ကွန်ပြူတာသုံးရာတွင် စံနစ်တကျထိုင်၍ သုံးပါ။ လိုအပ်ပါက မော်နီတာနှင့် ကီးဘုတ်တို့ကို သုံးစွဲရာ၌ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေရန် နေရာရွှေ့၍ ချိန်ညှိပါ။
၇။ မျက်စိကိုအားကောင်းစေသော ဗီတာမင် အေ၊ စီ၊ အီး နှင့် ဇင့် တို့ပါဝင်သော အားဆေးများကို သုံးစွဲပါ။
အဆိုပါအချက်များကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ကွန်ပြူတာသုံးစွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သော ရောဂါများကို ကာကွယ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Ezine (Computer Vision Syndrome –7Tips to Avoid Computer Vision Syndrome ) ကိုပြန်ဆိုသည်။
အဲဒီထဲကကွန်ပြူတာသုံး မျက်မှန်က ဘာလဲတော့မသိ၊ ကျုပ်သုံးနေကျ မျက်မှန်လေးအကြောင်း ပြောချင်လို့..
pinhole glasses တဲ့..။ မျက်စိမကောင်းသူ(မျက်မှန်သမား)တွေအတွက်လည်း အင်မတန်အသုံးတည့်ပါတယ်လို့..။
Pin Hole glasses are most suitable for activities such as sitting indoors and outside, reading, computer work, and watching TV.
အဲဒီ pinhole glasses ဘယ်မှာများ ဝယ်လို့ ရနိုင်ပါသလဲ…..?
pinhole glasses ဆိုတာလေးလဲ ရှင်းပြပါဦး။
အဲဒီလင့်ခ်မှာ ဈေးရော။ ရောင်းတဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ရော ရှိပါတယ်။
Ebay မှာလည်း ရနိုင်ပါတယ်။
အဲဒါတပ်ပြီး ကွန်ပြူတာလုပ်ရင် မျက်စိကို အေးနေတာပါပဲ။ မျက်စိအညောင်းပြေပါတယ်။ တီဗီကြည့်လည်း ကြည့်နေရင်း မျက်စိအနားရပါတယ်။
မျက်မှန်သမား အဲဒါပဲတပ်ပြီး မျက်မှန်မလိုပဲ သေသေချာချာ မြင်နိုင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ မျက်မှန်ပါဝါနည်းရင် မျက်မှန်တောင် မလိုတော့ပဲ မျက်စိကောင်းသွားနိုင်ပါကြောင်း….
ကျေးဇူးပါ မျက်မှန်တော့တပ်တယ် ဒါပေမဲ့ ကွန်ပျူတာသုံးမျက်မှန်လားတော့ မသိဘူး ကွန်ပျူတာသုံးတာနဲ့ တီဗီကြည့်တာများပြီး မျက်မှန်ဆိုင်သွားပြတော့ မျက်စိက သူငယ်အိမ်နည်းနည်းစောင်းနေတယ်ဆိုပြီးလုပ်ပေးလိုက်တာ အခုလိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက် အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ဇာတ်ဆရာ kai ပြောတဲ့ ရပ်ကွက်က ကျွန်တော်တို့ ရွာနဲ့ က အဝေးသားဗျ
ကျွန်တော် လည်း အခု နည်းနည်းဝါးလာပြီဆိုတော့
နမ နှစ်ကောင် ရောင်းပြီး ဟို အရုပ်ပေါ်တဲ့ အပြားအသစ်ကြီးဝယ်မလားလို့စဉ်းစားနေလို့ ဗျ
ကျွန်တော်သာ ဒီရပ်ကွက်ကို မလာတော့ဘူးဆိုရင်
ဒီ စာမျက်နှာပေါ်က ပညာရှိတွေ တော်တော်ပျော်ကြမယ်လို့ လည်း မျှော်လင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်က ငပေါဆိုပေမယ့် ကိုယ်ကျင့်တရားကိုတော့ လေးစားသဗျို့ 